The OnePlus 7 Pro na-enweta ule siri ike nke iguzogide na nkwụsi ike | Gam akporosis
The OnePlus 7 Pro na-enweta JerryRigEgwuregwu siri ike na ntachi obi
The flagship smartphone si China dabeere OnePlus, na OnePlus 7 Pro, na oru a awa ole na ole gara aga ọnụ na OnePlus 7, na JerryRigEverything's Zack etinyeworị ya site na nyocha anụ ahụ sara mbara iji nyochaa ịdịte aka nke ngwaọrụ ahụ.
Ọ bụ ezie na ekwuru nke ọma, yana yana ezigbo ihe dị mma, ule anyị ga-ahụ n'okpuru na-agwa anyị ole na ole ekwentị ga-esi guzogide nnwale adịte aka nke etinyere ya na ya. Ka ahụ!
Nke a bụ otu OnePlus 7 Pro na-eguzogide ule JerryRigEverything
Ihe niile na-amalite site na nyocha ncha na, dị ka anyị pụrụ ịhụ, flagship na ihuenyo amalite ọkọ na larịị 6 na Mohs ekweghị ekwe ọnụ ọgụgụ, ihe na - eme na ụdịrị ogo ahụ maka nchedo nke Corning's Gorilla Glass 6 nyere. Na ọkwa 7, ị nwere ike ịmalite ịhụ mkpọtụ miri emi.
A na-ejikwa iko na-adịghị n'ihu igwefoto na-agbapụta na-echekwa ngwa ngwaMana mpaghara gbara ya gburugburu bụ plastik, nke na-adịkarị mfe ịkọ ọkọ. Ejiri igwe mee akụkụ nke ekwentị ahụ, gụnyere tray kaadị SIM, ụda olu, bọtịnụ ike na ihe mmịfe njikere.
Mpempe azụ nke OnePlus 7 Pro na-abịa na Gorilla Glass 5, iji chebe ya na ọkọs A na-etinye akara ngosi OnePlus na akara okwu n'okpuru iko ka ọ ghara ịdị mfe iwepụ.
Ugbu a, na-abịa n'ule ule ahụ, ama ama ama ama ama ama. Egosighi Enweghị pikselụ nwụrụ anwụ mgbe ihe dị ka nkeji nke inwe ọkụ ọkụ na-emeghe ozugbo. N'iji ya tụnyere, akụkụ ndị ọzọ AMOLED na-adịkarị ihe dị ka sekọnd 20 ruo mgbe mmebi pixel na-enweghị ike iweghachi.
Nweta ọmarịcha akwụkwọ ahụ aja na OnePlus 7 na 4K na Abstruct
Ọbụna mgbe iko dị n'elu ihuenyo mebiri site na ọkwa 7 Mohs ọkọ, Onye OnePlus 7 Pro si na ihuenyo mkpịsị aka mkpịsị aka ka na-arụ ọrụ. Ekwentị ahụ rụkwara nke ọma na ule mgbanwe, n’egosipughi nkewa ma obu okpukpu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » The OnePlus 7 Pro na-enweta JerryRigEgwuregwu siri ike na ntachi obi
Foto Google ga-akwụsị mmekọrịta na Google Drive site na July
Google Translate na-eji nchọpụta asụsụ akpaka na ọnọdụ igwefoto